Maitiro akachengeteka ekuchengetedza ako GNU / Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro akachengeteka ekuchengetedza ako GNU / Linux distro
Kana iwe uine hanya nezve chengetedzo mune yako inoshanda system, iyi mimwe miitiro yakanaka uye matipi aunogona kukudziridza mune yako yaunofarira GNU / Linux distro kuti ive yakachengeteka zvishoma. Iwe unotoziva kuti nekutadza * nix masisitimu akachengetedzeka kupfuura Microsoft Windows, asi iwo haasi eupenzi. Hapana chinhu chiri 100% chakachengeteka. Asi nechengetedzo iyoyo yekuwedzera uye nerubatsiro rweaya mazano, iwe unenge wakadzikama zvishoma maererano nekugona kurwisa.
Uye zvakare, iwo matipi akareruka asinganetsi kune vazhinji vashandisi, asi nekuda kwekuregeredza kana usimbe vazhinji vanoregeredza. Iwe unotoziva kuti kushandisa chinguva uchigadzirisa yako system uye zvimwe zvirongwa zvinogona kukuchengetedza zvinotyisa. Kana iwe uchida kuziva kuti ndezvipi zvinhu izvo zvaunogona kuita kuchengetedza system yako, heano mazano edu ...
ari Gumi mirairo yekuchengetedza:
Nguva dzose dhawunirodha software kubva kunovimbika masosi. Uye izvo zvakare zvinoreva mufananidzo weiyo distro yako, iwo madhiraivha uye maapplication. Semuenzaniso, kana iwe ukakanda kunyorera, edza kushandisa software centre ye distro yako, iyo yepamutemo marekodhi, kana kukundikana izvo, webhusaiti webhusaiti webhusaiti, asi usambofa wechitatu-bato mawebhusaiti. Izvo hazvivimbise chero chinhu, vangadai vakarwisa iyo yepamutemo server uye vakachinja iyo binary kana zvinyorwa, asi zvirinani izvo zvakanyanya kuomarara. Kana iwe uri kuyedza kurodha pasi madhiraivha, unogona kuzviita kubva kuGitHub kana ari akavhurwa sosi, kana kubva kune yepamutemo webhusaiti yeiyo Hardware chishandiso kana vari vechokwadi. Uye yemitambo yemavhidhiyo ditto, semuenzaniso, kubva kuValve's Steam. Izvi zvinokutadzisa kubva kurodha pasi software pamwe nekodhi dzinogona kunge dzakaipa. Rangarira kuti kana ukashandisa Waini, kushomeka kweavo Windows zvirongwa zvinogona kukukanganisa iwe ...
Dzima mushandisi wemidzi pazvinogoneka. Gara uchishandisa Sudo.
Usambofa wakashandisa X Windows kana mabhurawuza senge mudzi. Kana mamwe mapurogiramu ausina chivimbo chakazara maari.
Shandisa imwe password yakasimba. Ndokunge angangoita zvisere zvisere mavara. Izvo hazvifanirwe kuve nemazwi anozivikanwa, mazuva ekuberekwa, nezvimwe. Zvakanaka, shandisa mubatanidzwa wezasi, mavara ekumusoro, nhamba, uye zviratidzo. Semuenzaniso: aWrT-z_M8d44 $
Usashandise iyo imwecheteyo password kune zvese, ndokuti, dzivisa master passwords. Nekuti kana vachigona kuziva, vanogona kuwana kune zvese. Kunyangwe kana mapasuru (fence), ivo vanogona kupinda muchirongwa, asi kwete ese masevhisi.
Bvisa software yese yausiri kuzoshandisa. Ita zvakafanana nemasevhisi, iwe unofanirwa kumisa ese masevhisi ausingafunge kuti anodikanwa kwauri. Vhara madoko ausingashandise.
Kana iwe uchifunga kuti ndiwe wakabatwa nekurwiswa kana kuti vane password yako, zvingave zvakanaka chinja mapassword ako. Kana maviri-nhanho ongororo inogoneka pane ako masisitimu, enda izvo.
Chengetedza iyo system nguva dzose kusvika padanhokana. Iwo mavara matsva anofukidza kumwe kuzivikanwa kunetseka. Izvi zvinozovatadzisa kubiridzirwa.
Usape zvakanyanyisa ruzivo kana iwe uchinyorera pamhepo masevhisi. Zvirinani kushandisa misi yekunyepa kana mazita kana zvisina kunyanya kukosha kushandisa iwo chaiwo. Zvakare, usatumira technical kana system system mune yeruzhinji maforamu.
Kana iwe ukawana mameseji kubva mail ine zvisingawanzo zvakanamatira, ine zviwedzero senge .pdf.iso, nezvimwe, usatore chinhu. Uyezve dzivisa kubhurawuza mawebhusaiti asingazivikanwe kana kurodha pasi zvirongwa zvinoonekwa pavari Iyo inofuratira zvinogona kuitika mameseji eSMS kana yechero imwe mhando kukumbira kumutsidzira sevhisi, kana kupa password yevhisi. Vanogona kunge vari phishing maitiro.
Kune rumwe rutivi, Ini zvakare ndinokuraira iwe chimwe chinhu:
Zvematongerwo enyika Zvemushandisi zvakajairika
Dzima iyo SSH protocol Ehe, kana usiri kuzoishandisa. Chero zvazvingaitika, dzima midzi yekuwana, seta password yakasimba, uye chinja default default port. Kwete, zvinowanzo fanirwa kure kure manejimendi. Asi iwe unogona kuzvisimbisa neyakagadziriswa yakanaka.
Gadzira iptables Iwe unofanirwa kunge uine mimwe mitemo yekutanga yakatsanangurwa. Izvo zvakakosha kuti uve neyakaomarara system yemitemo yekuchengetedza server.
IDS Izvo hazvidiwe. Ehe, iwe unofanirwa kuve neanobatsira edziviriro masystem senge IDS, nezvimwe.
Panyama / bhuti chengetedzo Izvo hazvina basa, asi hazvingakuvadze kana iwe ukaisa password kune yako BIOS / UEFI uye GRUB yako. Izvo zvakakosha kudzora kupinda kuburikidza nekudzivirirwa kwemuviri.
Data encryption Izvo hazvina kukosha, asi zvinokurudzirwa zvikuru kunyorera disk yako. Zvinoenderana nenyaya imwe neimwe. Mune zvimwe zvinofanirwa kuitwa, mune vamwe hazvifanire. Kana pamwe chete pane zvimwe zvikamu. Zvinoenderana nerudzi rwe server.
VPN Zvingave zvakanaka kushandisa VPN yakagadzirirwa yako router kuitira kuti zvese zvishandiso zvaunobatanidza zvichengetedzwe. Kana zvirinani, zviite mune iyo iwe yaunonyanya kushandisa. Kwete, nekuda kwechimiro cheseva, haifanire kunge iri kumashure kweVPN.
Gonesa SELinux kana AppArmor Ehe, iwe unofanirwa kuimisa. Hongu, zvakakosha.
Wongorora mvumo, hunhu, uye uve nemabatiro akanaka ehurongwa. Inokurudzirwa. Zvakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro akachengeteka ekuchengetedza ako GNU / Linux distro
Chinyorwa ichi chakanyanya kunaka, asi ikozvino iwe unofanirwa kugadzira imwe kutsanangura zvakajeka kuti mazano ese aunopa anoitwa sei, nekuti semuenzaniso handizive kuti mangani acho akaitwa uye kuti ndanga ndichishandisa Linux kweanenge makore gumi. Uye ini ndinofunga kuti izvo zvinofumurwa nechinyorwa chino zvakakosha zvakanyanya uye kuti haufanire kungotaura zvekuita chete, asi zvakare tsanangudza kuti zvinoitwa sei.
Chinyorwa chakanakisa, vhidhiyo yedhodhi ingave yakanaka kwazvo uye yaizobatsira vese vashandisi veGNU / Linux vese novice uye vemberi. Kwaziso.
Zano iri rakanaka mune zvese, asi pakanga paine kukuvadzwa kwazvino neSudo, iyo mukuwedzera kune kushoropodzwa, idudziro isingafanire kuenda isingazivikanwe nekuti akawanda ma distros haasati aigadzirisa izvozvi, chigamba cheSudo hachisi kwese kwese.
Chimwe chinhu ndechekuti pane matipi akati wandei anopokana nezvakataurwa mundima yechipiri nekuti haasi madiki kana akapusa, semuenzaniso, ndeipi mitemo yepasipasi iyo munhu anofa, munhuwo zvake waanofanira kugadzirisa? Kana chii chinonzi IDS, inouya nekumira, yakaremara sei? Kune avo vanofarira, kuchengetedzwa kwemuviri kunogoneswa sei pakutanga? Unogadzirisa sei VPN yeiyo router, ndeipi VPN sevhisi inokurudzirwa uye Usadaro unganidza data rangu uye unoremekedza zvakavanzika zvangu? Hausi mubvunzo uri nyore kupindura.
SElinux muFedora makore apfuura vakange vari marwadzo mumabhora uye kumisikidza zvaive zvisiri nyore, zvakare unofanirwa kutsanangura maitirwo azvo uye / kana neApp Armor futi. Chekupedzisira, iwe une sei yakanaka hutongi mutemo? uchifunga kuti vazhinji vashandisi vari kure ne sysadmin profile iyo inogona kuve neyakajeka pfungwa yenyaya iyi.
Ndinovimba kuti chinyorwa ichi ndicho chidimbu chechando chevamwe vanoverengeka pamusoro pekuchengeteka uko kunopinda mune izvi kurudziro kuti kunyangwe zviri zvechokwadi, hazvina kujeka kana kupfava kune vakawanda vashandisi.
Pindura kuna Aradnix
Mhoroi, ndinobvumirana nevamwe tsananguro diki pane mimwe misoro yakurukurwa yaisazokuvadza. Asi pamwe isu tiri kukanganisa kushamisika hahaha. Kwaziso uye chinyorwa chakanaka.
Kali Linux 2019.4 inosvitsa nyowani Windows 10 theme kana iwe uchifanira kuvanza
Kupera kwedenho. Isa maviri asiri maLinux anoshanda masystem